Ọdịnihu nke B2B Ahịa: Bgwakọta N'etiti & n'èzí Otu | Martech Zone
Ọrịa oria COVID-19 wepụtara ihe na-akpata nsogbu na mpaghara B2B, ikekwe kachasị mkpa banyere etu azụmahịa si eme. N'ezie, mmetụta nke ịzụ ndị ahịa adịwo ukwuu, mana kedu maka azụmaahịa na azụmaahịa?
Dabere na The B2B Ọdịnihu Shopper Report 2020, naanị 20% nke ndị ahịa na-azụta kpọmkwem site na ndị na-ere ahịa ahịa, gbadata site na 56% na afọ tupu. N'ezie, mmetụta nke Azụmaahịa Amazon dị ịrịba ama, mana 45% nke ndị zaghachiri nyocha ahụ kwuru na ịzụrụ ịntanetị dị mgbagwoju anya karịa offline.
Nke a na-egosi na ọdịnala ahịa chanel agwakọta nirvana nke n'ime na n'èzí ahịa otu nnukwu nsogbu. Ecommerce ugbu a bụ ọwa dị mkpa na ụlọ ọrụ na-agba ọsọ iji mee ka ọ dịrị ndị ahịa mfe ịzụrụ n'aka ha n'ịntanetị, n'ime ndị otu ahịa ngwa ngwa gbanwere ịrụ ọrụ ha site n'ụlọ, ngalaba na ụlọ ahịa na-emeghe ma ọ bụrụ na ha dị mkpa. Ndị na-ere ahịa n'ọhịa ahụ kacha mma iji mezie ọrụ ha ọsọ ọsọ iji nwee ike ịnweta ndị ahịa ha na-enweghị ike ịkpọ ha n'onwe ha.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke ahịa akwagala na vidiyo mkparịta ụka / ekwentị / ahịa azụmaahịa, ebe ụfọdụ mgbagha na-adị, ihe karịrị ọkara kwenyere na nke a dikwa oke ma ọ bụ karịa karịa ụdị ahịa ejiri tupu COVID-19.
McKinsey, B2B ntinye ntinye dijitalụ: Olee otu ahia sirila gbanwee n'oge COVID-19
Ọdịnihu nke ala ahịa agbanweela ngwa ngwa n'okpuru nsogbu nke ọgba aghara, mana ndị isi azụmaahịa maara ihe na-agbanwe na nkebi, na-eji nyocha ahịa amụma iji jikọta n'ime na n'azụ ahịa ma kaara ndị ahịa ọ bụla mma.
Enweghi ohere na ogologo ọdụ nke Akaụntụ Ndị Ahịa
N'ime ụlọ ọrụ B2B, 20% nke ndị ahịa na-ahụkarị na usoro akaụntụ udi - na ezi ihe kpatara ya.
Ọ bụghị ihe omimi na 80% nke ego ha ga enweta sitere na ọkwa a dị elu. N'ụzọ ziri ezi, a na-ahọpụta ndị na-ere ahịa kachasị mara amara na ijigide ma na-eto mmekọrịta ndị ahụ.
Ka oge na-aga, site na mmụba ngwaahịa ma ọ bụ njikọta na nkwakọba ihe, ụlọ ọrụ toro toro n'ụzọ dị mgbagwoju anya nke na-ajụ ndị ahịa ahịa n'otu oge ka ha kpuchie ọtụtụ akụkọ mgbe ha nabatara nke ahụ, site na ime nke a, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ahịa anaghị anata nlebara anya raara onwe ha nye jigide ma too obere akpa. Agbanyeghị, na nsogbu nke COVID-19, ọ na-ajụ ajụjụ a: Ego ole ka ị na-efu na ọdụ ogologo?
Nchoputa si na anyi akụkọ benchmark zuru ụwa ọnụ gosi na ohere zuru oke nke inye ndị na-ere ahịa ike ikike idowe ma bawanye akụkọ dị n'ime gị dị ahịa isi bụ ịrịba. N'ihe banyere ma ndị ahịa na-ere ahịa ma na-ere ere, ụlọ ọrụ B2B anaghị ejide ebe ọ bụla site na 7% ruo 30% nke ego ha nwetara.
Budata Report Global benchmark
Ọdịnihu nke B2B Ahịa: A lendgwakọta nke Na Na N'èzí Ahịa
Dị ka akụkọ McKinsey si kwuo, n'èzí ma ọ bụ ndị na-ere ahịa n'ọhịa na-arụ ọrụ karịa nke ndị ahịa ha n'ime. Oge echekwara njem na ịga na akaụntụ ha dị elu na-enye ohere ọhụụ, ohere echetara maka otu ndị ahịa a nwere ọkaibe: gbanwee ụdị ahịa ahịa ọcha ha na ogologo ọdụ nke akaụntụ ndị ahịa ma nye ha ike ịgwọ ndị ahịa ọ bụla dị ka akaụntụ dị mkpa.
Ogologo ọdụ nke akaụntụ ndị ahịa, mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya akaụntụ ụlọ na nkesa, na-eje ozi mgbe ị gara na ngalaba ma ọ bụ kpọọ mgbe ha chọrọ ihe. Jiri bandwidth dị ugbu a nke ndị ahịa n'èzí na-enye ha mmụba na omume mgbake iji soro ndị ahịa a. Ntụle ahịa amụma na-ebu amụma nwere ike itinye nghọta ndị a ọsọ ọsọ, na-aza ajụjụ maka ndị ahịa niile na otu ngwaahịa.
Nkọwa amụma ahịa site n'omume uto site na sayensi sayensi di omimi iji meputa ihe omuma ahia zuru ahia nke gbadoro aka na ndi ahia kacha mma nke ulo oru, na-atule ihe eji emefu, ego zuru ezu, na obosara nke ngwaahịa azuru. Tinye n'ọrụ clustering na mmekọrita dabeere algọridim, ọ ọkụ ọ bụla ahịa na ezigbo ezigbo zuo ụkpụrụ profaịlụ na-eduzi reps ozugbo na ihe ndị ahịa na-adịghị ugbu a ịzụta… ma kwesịrị.
Ọ na-ekpughepụtakwa omume mgbake site na ịchọpụta ndị ahịa “nwere ihe egwu” ndị na-egosi akara ngosi nke mgba okpuru na otu ngwaahịa ma ọ bụ karịa na ngwaahịa site na iji usoro dị elu, patent algọridim iji jee ozi mpaghara ụfọdụ ebe ego na-adalata ma ọ bụ furu efu kpamkpam. N'adịghị ka akụkọ ọdịnala azụmaahịa ọdịnala, usoro a na-ewepu mkpọtụ site na ịza ajụjụ maka usoro ịzụta, usoro oge, ịzụrụ otu oge, ma ọ bụ omume ịzụ ahịa na-agbanwe agbanwe, iji wepu echiche ụgha na nghọta.
Amụma ahịa ahịa ejirilarịrị ụlọ ọrụ B2B ejiri ọsọ na ngwa ngwa dị elu, Ihe oriri na nkesa. Ọ bụrụ na ị nwere nyocha ahịa ịkọ ahịa ebe taa, na-ebute ụzọ nghọta ndị a n'ogologo ọdụ nke akụkọ maka ndị na-ere ahịa n'èzí dị mfe ịme. Y’oburu n’inweghi ugbua nyocha ahia ebe, ibido bidoro gbagoro ma nwekwaa ike ibi na ahia gi n’ime izu ano.
Tags: b2bnje CoronaCOVID-19n'ime ahịamkpọchin'èzí ahịaire ekwentịịkọ ahịa gbasara amụmaahịa ọwausoro akaụntụvideoconferencingahịa weebụamamiihe
Ihe 5 Dị Mkpa Ka to chọọ na Formdị Buildinglọ Ntanetị Onlinentanetị